ကြောက်တတ်လျှင် မကြည့်ရ ( မြွေအရေခွံထုတ်လုပ်မှူ ဖြစ်စဉ်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကြောက်တတ်လျှင် မကြည့်ရ ( မြွေအရေခွံထုတ်လုပ်မှူ ဖြစ်စဉ်)
ကြောက်တတ်လျှင် မကြည့်ရ ( မြွေအရေခွံထုတ်လုပ်မှူ ဖြစ်စဉ်)
Posted by etone on Jun 29, 2011 in Copy/Paste, How To.., Photography | 25 comments
မနေ့က ကြိုးစားပြီး တင်ထားတဲ့ပုံတွေ တင်ပြီးပြီးချင်း သဂျီးက ဆိုက်ပြောင်းပစ်လိုက်တာ ဘာမှ မမြင်ရတော့လို့ ဒီနေ့ ဒက်ဒစ်ပြန်လုပ်ပေးထားတယ်… မနက်ရှစ်နာရီကျော်ကတည်းက တပုံချင်း ဆိုက်ကြီးနဲ့ တင်ချင်လို့ စောင့်တင်ပေးတာ …. အခုနေ့လည်1နာရီခွဲမှ အကုန်တင်လို့ရတော့တယ်… ။ မမြင်ဖူးတာလေး မြင်ဖူးအောင် ပြချင်ယုံရယ်ပါ … ။ ကိုယ်စတိုင်ကျကျ ဖြစ်ဖို့ … သူများ အသက်တွေ စတေးနေရတယ်ဆိုတာ ……မြွေရေခွံအိတ်မှ ကိုင်ချင်တဲ့ မိန်းမတွေအတွက် သိစေယုံပါပဲ… ။
FWD mail ကရတာပါ …မေးလ်ကနေ မမြင်ဖူးသေးတဲ့လူတွေ အတွက်ပါ … ။ သဂျီးက ပို့စ်တပုဒ် ပွိုင့် ငါးဆယ်တောင်ပေးထားတာ ဘာမှ တင်ပြီး မမြင်ရတာတော့ မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်… သူများတွေ လာမဆဲခင် မြန်မြန် အက်ဒစ်လုပ်လိုက်ရတယ် ။
ဒုက္ခပါပဲ ပုံတွေ တင်ထားတာ တပုံမှ ပါမလာဘူး ။ ခေါင်းစဉ်လည်း ပျောက်နေတယ် ..
ဟုတ်ပါတယ် ။ မှန်ပါတယ်။ ထောက်ခံပါတယ်။ … အခု လိုတင်ပြပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Bookmarks လုပ်ထားလိုက်ပါပြီ။ … :D
အော်ငိုချင်လာပြီနော် အက်ဒစ်လုပ်တာလည်း အဆင်မပြေဘူး ပုံတွေက တလွဲချည်းပေါ်နေတယ် ဟင့်
တွေ့ပြီ တွေ့ပြီ.. ဟဲဟဲ :o:
etone ရေ တွေ့ပါပြီ ပုံတွေတော့ထ့်နေပါတယ်
မမြင်ဘူးတဲ့ ပုံတွေကို အခုလို စိတ်၇ှည်လက်ရှည်သင်ပေးလို့ ကျေးဇူးပါ ….
အဲ့ပုံတွေ အရင်ကမေးလ်ထဲရောက်လာလို့ ကြည့်ဖူးတယ်
အဲဒီလုပ်ငန်းက တော်တော်ရက်စက်တဲ့ အလုပ်ပဲ
နောက်ဘ၀ ဒီလူတွေဘယ်လိုဖြစ်မလဲ မတွေးရဲစရာ…
ဖွတ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ပန်ပန်ရဲ့ … မိချောင်းထင်တာပါပဲ … ။
ဖွတ်ပါဗျ … မိကျောင်းက ကျောပေါ်မှာ အတက်လေးတွေ ပါတယ် ….
အိတ်ပုံတွေ အဲဒိ အရေခွံတွေက ထုတ်တဲ့ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်း ပုံတွေ ပါတဲ့ အီးမေး မြင်ဖူးတယ်။
မိချောင်း သားရေနဲ့ လက်ကိုင်အိတ် လုပ်တာ.. ပြောသာ ပြောပါတယ် အတုတွေ ကြီးပါပဲ.. ဟုတ်သလိုလိုနဲ့ အတုတွေ များတယ်။ မိချောင်း သားရေ အစစ်ဆိုပြီး ဈေးကြီးကြီးသာ ညာရောင်းနေကြတာ.. ပစ္စည်းတွေကလည်း ပေါမှ ပေါ အသိတယောက်က ပြောတယ် မိချောင်းတွေ တော်တော် ပေါတာပဲတဲ့.. မိချောင်း သားရေ ရဖို့ မွေးမယ် ဆိုရင် မိချောင်း တကောင်ကို ၅နှစ်လောက် မွေးမှ သားရေ ကောင်းကောင်းရတာတဲ့.. ၅နှစ် လောက် စောင့်မှ ရတဲ့ သားရေ ကို ကိုရွှေတရုတ်က ဖန်တီးလိုက်တာ.. ထောင်သောင်းချီလို့ ပေါများပြီး သြတိုက်နေတာပဲ။
မြွေခေါင်းကိုရဲးဒင်းကြီးနဲ့ရက်ရက်စက်စက်။ ကြွက်တွေတော့ သောင်းကျန်းတော့မှာပဲ။
ဖွတ်ပဲဖြစ်ဖြစ် မိကျောင်းပဲဖြစ်ဖြစ် မြွေပဲဖြစ်ဖြစ် ပိုက်ဆံအိတ်လုပ်ပြီးတော့ မကိုင်ပါရစေနဲ့ ကြောက်လို့ပါ…
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ချီးလဲချီးကျူးပါတယ် … ပုံတွေတင်ရတာ ဘယ်လောက်ခက်တယ်ဆိုတာာကိုယ်ချင်းစာမိလို့ပါ။
အဘပုရဲ့ ကျုပ်ဘာမှလည်း မလုပ်ရပါလားနော် … ။
သဂျီးကို ပြန်ပြသနာ ရှာလိုက် … ။ အဘပုရေးတုန်းက ကျုပ်ဆီကို အီးမေးလ်ဝင်တယ်… အခု အဲ့ဒီမေးလ်က ပြန်ကူးပေးမယ် စဉ်းစားတာလည်း မေးလ်ပါမတွေ့တော့ဘူး … ။ သဂျီး ဆိုက်ထဲမှာ မျက်လှည့်ပြနေတယ် ထင်တယ် ။ ဒါမှမဟုတ် ဟိုတလောက မော်ဒရိတ်ဒါခန့်ဖြစ်လိုက်လား မသိဘူး အကုန်ဖျက်နေတယ် ဗျို့ … ။
ရှားရှားပါးပါး 77 ကိုရန်တွေ့ထားတာလေးတွေ ပျောက်သွားလို့ … ပြန်တင်ထားရသေးတယ် … ။
နှစ်လုံးပျူးဂျီး အမြဲ ပြောင်လက်နေပါဂျေ ခည
ငါ့နှယ် … :O
အကြီးအကျယ်ကန့် ကွက်ပါတယ်.. ဒီအလုပ်မျိုးတွေကို… လုပ်တဲ့လူရန်သူပဲ..
အိတ်တွေ ကိုင်ချင်နေတာ ဈေးကြီးလို့မကိုင်နိုင်နေတာ…ခုတော့ မကိုင်နိုင်တာကိုဘဲ ကျေးဇူးတင်နေပြီ.. သနားဖို့ကောင်းလိုက်တာ..
Animals kill animals for only their food or “living” according their animal law (bully by stronger ones).
Humans kill both animals and humans themselves for their food, clothes, living, (health)medicine, fashion,luxury, (money)wealth, and “power” while saying about “law,justice,kindness………………………….”.
Ooops! Mr.Human Being, you are cruellest one in the World.
ထူးဆန်းပါပေ့ ဆရာတွပ်ရယ် လို့ပဲပြောလိုက်ချင်တယ်..
မိန်းကလေးတွေ လှလှပပလေးလွယ် ရအောင်လုပ်ပေးထားတာလေ………
အသားတွေကအိတ်ဝယ်ရင် ပါဆယ်ထည့်ပေးမှာနေမှာပေါ့ gift အနေနဲ့
သားရေ အစစ်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံအနေနဲ့လေ
မြွေခေါင်းပါ ထည့်ပေးရင် ပိုတောင် စိတ်ချရဦးမယ်
နောက်တစ်ခါ မိန်းကလေးတွေ လယ်သာအစစ် ၀ယ်ရင် မြွေခေါင်းပါမှ ၀ယ်နော်
နို့မို့ဆို အင်နဲ့ မိနေမယ်